येशूको मृत्यु​—यसले हामीलाई कसरी लाभ पुऱ्याउँछ? | बाइबल प्रश्नहरूको जवाफ
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उङ्गाबेरे उम्बुन्डु एफिक एस्टोनियन ओसेसियन काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किसोंगे कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टुभालुअन डच डाँग्मे डेनिश ताहिटी त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली न्यानेका पापियामेन्टो (अरुबा) पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा माया मालागासी माल्टिज मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा वायुनाइकी शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन
महान्‌ व्यक्ति येशू मर्नुपछाडि कुनै कारण थियो कि?
हाम्रो सृष्टिकर्ता यहोवाले मानिसहरू कहिल्यै बिरामी नहोस् अनि नमरोस् भनेर बनाउनुभएको थियो। मानिसजाति सधैंभरि बाँचेको उहाँ चाहनुहुन्थ्यो। तर पहिलो मानव पुरुष आदम अनाज्ञाकारी भयो। त्यसकारण उसले सधैंभरि बाँच्ने आशा गुमाउनुपऱ्यो। आदमकै सन्तान भएको कारण हामीले पनि वंशानुगत रूपमा मृत्यु पाएका छौं। (रोमी ५:८, १२; ६:२३) तर आदमले गुमाएको त्यो जीवन मानिसहरूले फेरि पाओस् भन्ने सृष्टिकर्ता चाहनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले आफ्नो छोरा येशूलाई यस पृथ्वीमा मर्न पठाउनुभयो।—यूहन्ना ३:१६ पढ्नुहोस्।
सधैंभरि बाँच्न सकोस् भनेर येशूले हाम्रो लागि ज्यान दिनुभयो। त्यस्तो समय आएपछि तपाईं कसरी जीवन बिताउनुहुनेछ?
येशू ख्रीष्टले मानिसजातिको लागि आफ्नो ज्यान दिनुभएको कारण हामीले पापको क्षमा पाउन सकेका छौं। यसै पृथ्वीमा सधैंभरि बाँच्ने आशा पनि पाउन सकेका छौं। वृद्ध अवस्था, रोग अनि मृत्यु हटेपछि यो पृथ्वी कस्तो हुनेछ, बाइबलमा राम्रोसित बताइएको छ।—यशैया २५:८; ३३:२४; प्रकाश २१:४, ५ पढ्नुहोस्।
साधारण समारोह गरेर यो दिनको सम्झना गर्नू भनेर येशूले आफ्ना अनुयायीहरूलाई आज्ञा दिनुभयो। यसरी वर्षैपिच्छे उहाँको मृत्युको सम्झना गर्दा यहोवा र येशूले मानिसहरूलाई कत्ति माया गर्नुहुन्छ भनेर सम्झन सक्छौं।—लूका २२:१९, २०; १ यूहन्ना ४:९, १० पढ्नुहोस्।
यस वर्ष सोमबार, अप्रिल १४ तारिखको दिन सूर्यास्तपछि येशूको मृत्युको सम्झना गरिनेछ। हामी तपाईंलाई पनि यो समारोहमा उपस्थित हुन निमन्त्रणा दिन चाहन्छौं। कृपया आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा जानुहोस्।—रोमी १:११, १२ पढ्नुहोस्।
येशूको मृत्युको वार्षिकी मनाउन हामी तपाईंहरूलाई निम्तो दिन चाहन्छौं। येशूको मृत्युले तपाईं र तपाईंको परिवारलाई कस्तो लाभ पुऱ्‍याउँछ त्यस दिनको कार्यक्रममा उपस्थित भएर सिक्नुहोस्‌